लगबुक, नोभेम्बर 1-2 - वर्ल्ड मार्च
घर » हाम्रो बारेमा » नोटहरू थिच्नुहोस् » लगबुक, नोभेम्बर 1-2
23 / 03 / 2020 08 / 11 / 2019 द्वारा एण्टोनियो Gancedo
बार्सिलोनामा, वनओशन पट्ट भेल्ल बन्दरगाहमा, बाँसको यसको शान्त झण्डा देखाउँदछ हामी जहाजहरू भरिएको बन्दरगाहहरू चाहान्छौं न कि डु not्गा बाहेक।
1 - नोभेम्बर2- मार्सिलेबाट बार्सिलोनाको यात्रा थोरै हावाबाट सुरू हुन्छ। हामी पाल र मोटर नेभिगेसनको साथ अगाडी बढ्छौं। पूर्वानुमानका बारे ध्यान दिनुहोस् लाइबेकियो, वा बढ्दो दक्षिण-पश्चिम बतासको घोषणा गर्दै।
भन्न अनावश्यक छ, हामी हाम्रो अनुहार मा हावा छ। लियोनको खाडीको बीचमा नफस्न हामी अनुमान गर्न कोशिस गरौं।
राती हावा चल्दछ, आँधीबेहरी र बतासको बर्षा। बिहान, मुक्तिको साँचो शासन सुरु हुन्छ र हामी बार्सिलोनातर्फ लाग्छौं।
कडा, अर्को साइड इफेक्टको बीचमा पनि एक छ जसले तपाईंलाई दंग महसुस गराउँछ।
केहि समय पछि तपाईं वाशिंग मेशिनमा सा s्गको जस्तै महसुस गर्नुहुन्छ, नराम्रो: रेलि toमा जोडिएको एक मोजा जस्तो।
जब हामी सेलको प्रोफाइल देख्छौं, बार्सिलोना बन्दरगाहमा प्रभुत्व जमाउने ठूलो भवन, हामी सबै थियौं, केहि बढी वा कम, थोरै 'स्मूदीज'।
हामीले वनओशन पोर्ट भेलमा एउटा स्थान पायौं
थकित हामीले ओनोशन पोर्ट Vell मा एक स्थान फेला पार्‍यौं, एक मरीना जसको हामीसँग केहि छ। हामी स्पेसशिप जत्तिकै ठूलो मेगा नौका बीच स्ललेम गर्छौं।
बतासको हल्लाले शान्तिको ध्वज सहितको बाँस उसको आँखा लायकको जस्तो देखिदैन।
यस जहाजले कति जीवन बताउने थियो, कति व्यक्तिको कथा, कति झर्ने र चढाईका कथाहरू, कति माईलहरू, कति हाँस्नहरू, कति चिच्याउनेहरू, कति, यद्यपि यो समुद्री डाँडाको उदयमा भनिएको छ, "समुद्रको लागि जबरदस्त चाहना"।
यो नारा भन्दा धेरै हो, यो एक युद्ध रोएको छ। यस जहाजको ईतिहास 1982 मा शुरू भयो जब यसले फिनल्याण्डको बाल्टिक शिपयार्ड छोड्‍यो।
उसले दुई पटक हात परिवर्तन गर्दछ र जब ऊ पुग्छ डोन एन्टोनियो माजी एक्सोडस फाउन्डेशन उसको पछाडि विश्व यात्रा र दस बर्ष क्यारियर छ।
यो भनिन्छ कि जब फोन कल जहाज वितरण गर्न चाहने उदार जहाज मालिकबाट आयो, कसैलाई थाहा भएन कि यो के हो।
डोन एन्टोनियो एक पादरी हुन् जसले धेरै कुरा जान्दछन्
डन एन्टोनियो एक पादरी हुन् जसले धेरै कुरा जान्दछन्: मानिसहरूलाई समस्याबाट कसरी निकाल्ने, एउटा समुदाय वा अर्को कारणले सीमान्तकृत भएका मानिसहरूलाई समुदायहरूको नेटवर्क कसरी बनाउने।
उहाँलाई शिक्षकहरू र हजारौं अन्य चीजहरूलाई कसरी प्रशिक्षण दिने भनेर जान्दछन्, उनी निश्चय पनि “भगवानको लागि” मिसनको लडाईका पादरी हुन्, तर उनलाई थोरै वा कुनै जहाज थिएन, कम्तिमा सुरुमा।
भाग्यवस त्यहाँ एल्बा टापुमा एउटा समुदाय थियो र जहाज त्यो उद्देश्यका लागि नियत गरिएको थियो।
यसप्रकार बाँसको तेस्रो जीवन सुरु भयो जुन एक समुदायको मुख्यालयमा, सम्भवतः संसारको एक मात्र मामला बन्यो।
यहाँ, यात्रा गर्ने युवा व्यक्ति मार्गमा फर्कनको लागि सामना गरिरहेका छन् (र कोही, यो भन्नु पर्छ, स्किड थियो) सँगसँगै सेलिंग सहित धेरै उपकरणहरू छन्।
बाँसमा तपाईंले आफैंलाई र अरूलाई अगाडि बढ्न आदर गर्न सिक्नु पर्दछ
डु boat्गा एउटा सानो संसार हो जहाँ तपाईंले केहि नियमहरूको आदर गर्नुपर्दछ, तर अनिवार्य (यो तपाईंको जीवनमा निर्भर गर्दछ)।
यसमा तपाईंले अगाडि बढ्नको लागि आफैलाई र अरूलाई आदर गर्न सिक्नुपर्दछ, त्यसमा, समुद्रले तपाईंलाई डर र साहस गर्न सिकाउँछ। जहाँ तपाईं शाब्दिक रूपमा आफ्नो विगतलाई पछाडि छोडिदिन सक्नुहुन्छ र नयाँ व्यक्ति बन्ने प्रयास गर्नुहोस्।
अब यो नसोच्नुहोस् कि सबै हावामा छाल र कपालले भिजेको रोमाञ्चक साहसिक कार्य हो।
त्यहाँ क्याराभानहरू छन्, समुदायका बच्चाहरूको समुद्री शैक्षिक यात्राहरू, यति सफल छन् कि उनीहरूले "Apocalypse का कारावान" भन्ने उपाधि कमाए।
यद्यपि यस डु boat्गामा धेरै मानिसहरूले पालो र बत्ती, एक कडा कडा बतास र ठूलो शान्त बीच तिनीहरूको सन्तुलन भेट्टाए।
केही र केहि चालक दलका सदस्य भए र उनीहरू बाँसको बारेमा सिकेका एकजुटता नेभिगेसनको काम अन्य जहाजहरूमा जारी राख्छन्।
यो स्पष्ट छ कि हामी यस बन्दरगाहलाई धनीको लागि विवाह गर्दैनौं
यस जस्तो कथाको साथ, यो स्पष्ट छ कि हामी धनीहरूको लागि यो पोर्ट विवाह गर्दैनौं। तर 30-40 बाहिर गाँठो फुल्छ र छालहरू उठ्छ र बढ्छ ... हामीसँग धेरै विकल्पहरू छैनन्।
एक पटक मुरी on्गमा, यी मेगा यटहरूसँग भिन्नताहरू चिह्न गर्न, शान्तिका झण्डा र भूमध्यसागर सागरको झण्डा बाहेक, हामीले मोजा, ​​अण्डरवियर, स्लीपिंग ब्याग र शर्ट पनि राख्यौं।
कुनै श doubt्का हटाउन र आफूलाई अलग गर्न को लागी हामी चिया तौंली पनि राख्छौं।
भोलिपल्ट बिहान हामी वर्षाको खोजीमा मार्टियनहरूको जस्तै भौंतारिन थाल्यौं (यी सबै दिन पछि समुद्रमा हामी "गन्ध" गर्न थाल्छौं), पछि
समय, हामी बुझ्दछौं कि ती टाढा छन्, लगभग घाटाबाट 800 मिटर जहाँ हामी मोर छौं।
किन जाकूजी डु the्गामा राख्नु?
त्यसपछि प्रकाश: यो लगभग शून्य छ। अर्कोतर्फ, किन तपाईं सामान्य डुers्गामा जाकूजी राख्नुहुन्छ जब शावरहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ?
जे होस् वास्तविक प्रश्न यो हुनेछ: किन जाकुजी डु the्गामा राख्यो?
कसरी र किन समुद्र विलासिताको ठाँउ भएको छ भन्ने बारेमा त्यहाँ धेरै कुरा हुनेछ।
एक समय, कामदार, गरिब, अपराधीहरू र साहसी व्यक्तिहरू समुद्रमा बाहिर निस्के। आज त्यहाँ एउटा पूरै प्रणाली छ जुन समुद्रलाई धनीका लागि ठाउँ बनाउन चाहन्छ।
किन यस्तो छ? हाम्रो आफ्नै उत्तर छ: किनकि समुद्र सुन्दर छ। र केहि यो सुन्दरता केहि को लागी एक विशेषाधिकार को लागी चाहान्छ।
हामी, हाम्रा मोजाहरूसँग मेगा याटहरूको बीचमा, समुद्रमा अर्को बाटो दावी गर्न चाहन्छौं: एकताबद्धताको समुद्र जहाँ सुन्दरता सबैका लागि हुन्छ।
हामी जहाजहरू भरिएको पोर्टहरू चाहान्छौं कि होस्ट गर्छ र बाहिर नभएको जहाजहरू।
१ टिप्पणी "लगबुक, नोभेम्बर १-२"
Pingback: विश्व मार्च न्यूजलेटर - नम्बर 11 - विश्व मार्च